Qaladkii Carruurta Oo Kale Ayuu Sameeyey - Jamaahiirta Manchester United Oo Canaan Dusha Uga Tuuray Tababare Ole Gunnar Solskjaer - Cadalool.com
Qaladkii Carruurta Oo Kale Ayuu Sameeyey – Jamaahiirta Manchester United Oo Canaan Dusha Uga Tuuray Tababare Ole Gunnar Solskjaer
February 24, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Manchester United ayaa lumisay fursad y kusii xajisan lahayd booska kaalinta afraad ee horyaalka Premier League, waxaana ka cidhiidhsatay Arsenal oo 2-0 ku karbaashtay Southampton.
Manchester United ayaa Liverpool ku martigelisay garoonkeeda Old Trafford, waxaanay ku kala baxeen barbardhac goolal la’aan ah, iyadoo labada naadiba ay ciyaartooyo ka dhaawacmeen.
Manchester United, ayaa waxa qaybtii hore ka dhaawacmay Ander Herrera, Juan Mata iyo Jesse Lingard oo dhamaantood qaybtii hore la saaray, halka Marcus Rashford uu dhaawac ciyaarayey inta badan ciyaarta.
Liverpool ayaa waxa iyadana ka dhaawacmay Roberto Firmino qaybtii hore, waxaana lagu beddelay Daniel Sturridge, hase yeeshee wax saamayn ah weerarka labada kooxood midna kuma yeelanin ciyaarta.
Tababaraha Manchester United ayaa sameeyey qalad weyn oo dilay kooxdiisa qaybtii hore markii uu garoonka soo geliyey Jesse Lingard oo ku dhaawacmay ciyaartii PSG, waxaana 20 daqiiqadood oo kaliya markii uu ku jiray garoonka uu haddana dib ugu laabtay dhaawacii uu sida degdegga ah uga soo kacay.
Taageereyaasha Manchester United ayaa si weyn uga cadhooday beddelka uu ciyaarta kusoo geliyey Lingard, waxaanay ku tilmaameen inuu sameeyey qaladkii carruurta oo kale gaar ahaan ciyaal iskuulka.
“Khalad xun ayuu sameeyey Solskjaer. Wuxuu si buuxda u ogaa in Lingard aanu boqolkiiba boqol diyaar ahayn. 42 daqiiqadood ayuu saddexdii beddelba ku dhamaystay.” Sidaa waxa barta Twitterka ku daabacay mid ka mid ah taageereyaasha Manchester United.
“Ole Gunnar Solskjaer wuxuu sameeyey qalad dilaa ah oo uu kusoo geliyey Lingard oo aan si buuxda uga soo kaban dhaawacii. Waxa uu soo gelin karayey Sanchez.” Sidaana waxa soo daabacay taageere United ah oo ka cadhaysan go’aanka tababarahooda.
Halkan ka akhriso qaar ka mid ah farriimihii Jamaahiirta United: